/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Lapatinib
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike sitere na gram ka usoro nchịkọta nke Lapatinib (CAS 231277-92-2), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Lapatinib uzuzu bụ ọgwụ na-egbochi kansa cancer nke GlaxoSmithKline (GSK) mere ka ọ bụrụ ọgwụgwọ maka ụbụrụ siri ike dịka ọrịa kansa na akwara. FDA kwadoro ya na March 13, 2007, maka iji ndị ọrịa na ọrịa kansa na-eme ihe dị elu na ọgwụ ọgwụ na-ekiri ọgwụ Capecitabine. Lapatinib bụ mmụba nke mmadụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ụdị 2 (HER2 / ERBB2) na-anabata ihe na ebido epidermal na-akpata onye nata (HER1 / EGFR / ERBB1) tyrosine kinases inhibitor. Ọ na ejikọta na intracellular phosphorylation ngalaba iji gbochie nkwụnye autophosphorylation n'elu ligand ejide.
I.Lapatinib isi ihe:
Ọbara arọ: 581.0575432
Nchekwa Nche: 4 Celsius C
II. Lapatinib (231277-92-2) iji mee ihe na steroid steroid
Lapatinib (CAS 231277-92-2), aha ahia bụ Tykerb, Tyver.
2. Iji ọgwụgwọ Lapatinib:
1) Lapitinib bụ mbadamba nkume ga-eji ọnụ.
2) Mbadamba na-abịa na 1 usoro onunu ogwu, 250mg.
3) Were lapitinib dịka ntụziaka gị nyere dọkịta gị.
4) Lapitinib kwesịrị iwere ọ dịkarịa ala otu elekere elekere, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala otu elekere mgbe nri (buru ngụkọta ngụkọta n'otu oge kwa ụbọchị, nkesa nhazi adịghị atụ aro).
5) Unu eri ma ọ bụ ṅụọ mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi mgbe ị na-ewere Lapatinib (231277-92-2).
6) Ọ bụrụ na ị na-atụ uche dose ọgwụ laptinib, were ya ozugbo ị chetara ụbọchị ahụ. Ọ bụrụ na ị na-atụ uche ụbọchị, emela ka okpukpu abụọ gị n'ụbọchị nke ọzọ. Naanị ị ga-eme ka ị ghara ịchọta ya .Chezie onye na-ahụ maka nlekọta ahụike ma ọ bụrụ na ị maghị ihe ị ga-eme.
7) Dọkịta gị nwere ike ịgbanwe usoro ọgwụgwọ gị dị na-adabere n'otú ị kwadoro ọgwụgwọ ahụ.
3. Ịdọ aka ná ntị na Lapatinib
Lapatinib nwere ike ime ka mmebi imeju nwere ike buru oke egwu. Mmebi imebi nwere ike ime ngwa ngwa ma ọ bụ dịka oge dị ka ọtụtụ ọnwa mgbe mmalite ọgwụgwọ na Lapatinib (CAS 231277-92-2). Gwa onye dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ma ọ bụ nwee ọrịa imeju. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla n'ime ihe mgbaàmà ndị a, kpọọ dọkịta gị ozugbo: itching, yellowing of the skin or eyes, urine urine, mgbu na akụkụ aka nri nke afo, ọbara ọgbụgba ma ọ bụ nchikpu, ma ọ bụ ihe mkpuchi ma ọ bụ ọchịchịrị.
Debe ọrụ niile gị na dọkịta gị na laabu. Dika dọkịta gị ga-enye ụfọdụ ule nyocha ihu na tupu mgbe ị na-agwọ gị ka ị hụ ma imeju gị agaghị enwe ike imebi ma ọ bụ na lapatinib emerụla.
Gwa dọkịta gị gbasara ihe ize ndụ nke ịmalite ọgwụgwọ.
Lapatinib bụ ụdị ọgwụ ọjọọ a na-atụ anya ya (ọgwụ ndụ) nke a na-akpọ protein kinase inhibitor (TKI). Ọ bụ ọgwụ a na-atụ anya maka ọrịa cancer nke nwere protein buru ibu nke a na-akpọ HER2 (mmụba nke mmadụ na-eme ka ọ bụrụ onye na-anabata 2).
Ụfọdụ ọrịa cancer ara nwere ọtụtụ HER2. Ha na-akpọ HER2 ndị na-ekwu okwu ọma. HER2 na - eme ka mkpụrụ ndụ cancer na - eto ma kewaa. Lapatinib (231277-92-2) na-agbanyụ HER2 iji mee ka mkpụrụ ndụ kwụsị ịmalite ma ọ bụ nwụọ.
IV. Esi zuta Lapatinib si AASraw?
Buru ụzọ nyochaa "Lapatinib" kagbuo zara
Nwoke Jiri (4)
Ọla abụba (32)
Ọgwụ PCT (8)
ndị ọzọ na- (16)